Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Sabti Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaWararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Sabti Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
April 3, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Wargeysyada ciyaaraha ayaa si joogto ah usoo bandhiga xogta, xanta iyo dhaqdhaqaaqa suuqa, waxaananu idiinka soo xulnay qodobbadii ugu waaweynaa ee ay qoreen maanta oo Sabti ah:
Liverpool ayaa ka walaacsan xiddigeeda Mohamed Salah, waxaana xubno sare oo kooxda ah laga soo xigtay in ay muuqato in uu doonayo inuu ka tago kooxdan. (ESPN)
Manchester United iyo Chelsea ayay mid walba dhinaceeda u doonaysaa garabka weerarka Real Madrid ee Lucas Vazquez oo 29 jir ah. (ABC)
Chelsea waxay isha ku haysaa weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Augero oo ay doonayso in si bilaash ah ay kula soo saxeexato, iyadoo 32 jirkan uu si bilaash ah kaga tegayo Man City. Laakiin waxay u dhaqaaqayaan Aguero haddii ay waayaan Erling Haaland oo kaliya. (ESPN)
Real Madrid waxay diyaar u tahay inay iibiso laacibkeeda khadka dhexe ee Martin Odegaard, si ay u hesho lacag ay ku iibsato Haaland. Odegaard ayaa waqtigan amaah ugu maqan Arsenal, waxaanay Gunners doonaysaa inay si rasmi ah ula wareegto 22 jirkan. (Time)
Barcelona wali kama hadhin weeraryahanka reer Argentina ee Lautaro Martinez ee u ciyaara Inter Milan. 23 jirkan ayay doonayaan inay isku dayaan saxeexiisa haddii ay waayaan Haaland. (Sport)
PSG waxay ka fiirsanaysaa in weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe ay u ogolaato inuu iska tago xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay fashilmeen qorsheyaal heshiiska loogu cusboonaysiinayay. Waxa doonaya Real Madrid iyo Liverpool. (Le Parisien)
Barcelona ayaa ka fikiraysa in ay iska dayso saxeexa laacibka reer Netherlands ee Georginio Wijnaldum oo 30 jir ah, sababtuna waxay tahay in ay booskaas ka ciyaarsiin karayso 18 jirka reer Spain ee Ilaix Moriba. (Metro)
Weeraryahanka reer Nigeria ee Kelechi Iheanacho oo 24 jir ah ayaa la filayaa in uu qandaraas cusub u saxeexo Leicester City xagaagan. (Mail)
Juventus waxay doonaysaa in ay dib usoo ceshato weeraryahanka Everton ee Moise Keane oo hadda amaah ugu maqan PSG. 21 jirkan Talyaaniga ah ayaa sannadkii 2019 ay Everton kasoo iibsatay Juventus. (Tuttosport)
Tababaraha Tottenham ee Jose Mourinho wuxuu rumaysan yahay in weeraryahanka reer England ee Harry Kane oo 27 jir ah uu ku faraxsan yahay xaaladda kooxdiisa oo uu sii joogi doono. (Standard)
Inter Milan waxay doonaysaa in ay sii xajisato xiddigeeda reer Belgium ee Romelu Lukaku, laakiin dalab £102 milyan oo Gini ah ayaa ku qasbi doona in ay iibiyaan 27 jirkan. (Corierre dello Sport)
Leicester City, Crystal Palace, AC Milan iyo Sevilla waxay ku dagaallamayaan laacibka reer France ee Florian Thauvin oo 28 jir ah, una ciyaara Marseille. (L’Equipe)